काठमाडौं । गाई, भैंसीे, बाख्रा, ऊँट, याक र केही वनस्पतिको दूधबाट दही तयार गर्न सकिन्छ । वनस्पतिजन्य दूधमा भटमास, धान, नट्स, बदाम तथा नरिवल आदिबाट दही तयार गरिन्छ । यस्तो दही जनावरजन्य दूधमा पाइने ल्याक्टोज एलर्जी हुनेहरूको लागि र भेगान वर्गको लागि लाभदायक हुन्छ । दही प्रशोधित दुग्ध पदार्थ हो, जुन निकै स्वादिलो र स्वस्थकर हुन्छ । यसमा उच्च गुणस्तरको चिल्लो, प्रोटिन, क्याल्सियम, पोटासियम, पानी,…विस्तृत समाचार »
काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेसँगै बिदाको पक्ष र विपक्षमा मतहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सरकारी तथा निजी संघमा आबद्ध स्वास्थ्यकर्मीबीच पनि आइतबारको सार्वजनिक बिदाका विषयमा मत बाझिएको छ । चिकित्सक संघ नेपाल ९गोदान० ले आइतबार दिइने सार्वजनिक बिदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागु नहुने भनिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ । एउटै प्रवेश विन्दु र एउटै ऐनका…विस्तृत समाचार »
काठमाडौं । गर्मी मौसममा पसिना आउनु सामान्य हो । तर, पसिनासँगै दुर्गन्ध आउनु भने समस्या हो । दुर्गन्धले लज्जित बनाउँछ । तर, पसिनाको दुर्गन्ध किन आउँछ भन्ने कुरालाई भने विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पसिनाको दुर्गन्धले विभिन्न रोगको संकेत पनि गर्ने गर्छ । शरीरमा आउने दुर्गन्ध के हो ? पसिना छालामा भएको ब्याक्टेरियाको सीधा सम्पर्कमा आएपछि दुर्गन्ध पैदा हुन्छ । पसिना को आफ्नै बास्ना हुँदैन ।…विस्तृत समाचार »
काठमाडौं । पैदल हिँड्नुको फाइदा तपाईंलाई थाहा नै होला । यो एक यस किसिमको व्यायाम हो, जुन कुनै पनि मानिस सजिलै गर्न सक्छ । आजको व्यस्त जीवनशैलीको कारण विशेषज्ञ यताउती घुम्ने विषयमा बढी जोड दिन्छन् । यसबाट हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य दुवै राम्रो हुन्छ । हालैको एक अनुसन्धानका अनुसार यसबाट मृत्युको खतरा पनि कम हुन जान्छ । ५० हजार मानिसमा भएको थियो अनुसन्धान यो…विस्तृत समाचार »
२० मङ्सिर २०७८
काठमाडौं । चिसो मौसममा हाम्रो शरीरको पाचन प्रक्रिया सुस्त हुन्छ । पानी कम पिउने कारण शरीर पनि सुख्खा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बिरामी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार चिसोमा केही खानेकुरा खाली पेटमा खाने गर्नुपर्छ । यसले विभिन्न रोगहरूलाई कम गराउँछ । जसले दिनभर उर्जावान बनाउँछ । त्यसैले चिसो मौसममा नियमित रुपमा खाली पेटमा यी खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ । मेवा मेवा हाम्रो…विस्तृत समाचार »
१३ मङ्सिर २०७८
१३ मंसिर, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको निर्देशनपछि सहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीको पीसीआर परीक्षण शुल्क पनि अन्य सरकारी अस्पताल सरह एक हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा पिसिआर परीक्षण बापत लिइएको शुल्कमा एकरूपमा कायम गर्न र उक्त अस्पतालमा पनि अन्य सरकारी अस्पतालमा सरह शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि सोमबारबाट सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । गंगालाल…विस्तृत समाचार »
२३ कात्तिक, काठमाडौं । दुधमा ट्रिप्टोफेन र बायोएक्टिभ पेप्टाइड्स हुन्छन् जसले मिठो निद्रामा सघाउ पुर्याउँछ । तनावबाट टाढै बस्न चाहनुहुन्छ भने सुत्नुअघि एक गिलास दुध पिउन सक्नुहुन्छ । तौल घटाउन सघाउँछः तौल बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता नगरिकनै तपाईं राती सुत्नु अघि एक गिलास मनतातो दुध पिउन सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंलाई राती लाग्ने भोक र जथाभावी खाने बानीबाट छुटकारा दिलाउने गर्छ । स्वस्थ हड्डीको निर्माणः…विस्तृत समाचार »
काठमाडौं । चिसो मौसम सुरु हुने बित्तिकै मानिसहरुको जीवनशैली पूर्ण रुपमा परिवर्तन हुने गर्छ । कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोबाट शरीरलाई बचाउनका लागि मानिसहरु ऊनीको कपडाको सहारा लिन्छन् । तरपनि चिसोबाट जतिसुकै बच्छु भन्दा पनि छोइहाल्छ । यस्तोमा चिसो मौसममा पाइने केही विशेष खानेकुराले कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोबाट हामीलाई जोगाउने गर्छ । यस्ता खानेकुराले तपाईंको शरीरलाई तातो त राख्छ नै यसले स्वास्थ्यका लागि पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । यी…विस्तृत समाचार »
५ कात्तिक, काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलको निःशुल्क ओपिडी अभियानअन्तरगत आउने शनिवार(भोलि) कन्सलट्यान्ट फिजिसियन तथा कार्डियोलोजिष्टको निःशुल्क सेवा संचालन हुने भएको छ । नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत कन्सलट्यान्ट फिजिसियन तथा कार्डियोलोजिष्ट डा. शैलेन्द्रप्रसाद कुशवाहाले निःशुल्क ओपिडी सेवा दिन लागेका हुन् । डा. कुशवाहाले बिहान १० बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म बिरामीहरुका लागि निःशुल्क सेवा दिनेछन् । मुटुसँग सम्बन्धित समस्या भएका र अन्य शारिरीक अस्वस्थ्यता भएकाहरुले समेत डा.…विस्तृत समाचार »
परीक्षणको क्रममा रहेको एक खाने औषधीले कोभिडको गम्भीर लक्षण भएका बिरामीको अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था र मृत्यु आधाले घटाउने अन्तरिम क्लिनिकल परीक्षण परिणामले देखाएको छ। मोल्नुपिरभिर नामक चक्की कोभिडका बिरामीलाई दिनको दुईपटक दिइएको थियो। अमेरिकी औषधी उत्पादक कम्पनी मर्कले परीक्षण परिणाम अत्यन्तै सकारात्मक भएकाले बाह्य अनुगमनकर्ताहरूले परीक्षणकाल छोट्याउन अनुरोध गरेको जनाएको छ। कम्पनीले अमेरिकामा अबको दुई हप्तामा आपत्‌कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिन निवेदन दिने बताएको…विस्तृत समाचार »